Samachar Batika || News from Nepal » जिमले जुराएको जोडी
अमित चन्द्र आर्य र सनम मुलगुठी बडिबिल्डर हुन्। अमित सन् २०१७ मा भएको मिस्टर काठमाडौँ र मिस्टर भ्याली प्रतियोगिताको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। त्यस्तै मिस्टर भक्तपुर २०१८ को गोल्डमेडालिस्ट हुन् भने सनम २०१८ मा भएको मिस्टर भक्तपुरको महिला तर्फको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। प्रेमी–प्रेमिका उनीहरु ललितपुरको फिटसपमा बडिबिल्डरको रुपमा काम गर्छन्। दुवै जनासँग प्रजु पन्तले गरेको प्रेमिल अन्तरंग:
सनम : (हाँस्दै) हेर्नु त, अघि भर्खर यहाँ ठो’क्किएर सानो घा’उ भयो। (कान्छी औँला देखाउँदै) यो औँलाबाहेक सबै ठीक छ।
सनम : ढोकामा चे’पिएछ।
अमित : बिहान उठ्यो जिम आयो। नर्मल्ली साढे पाँचमा उठ्छु। मिल (खाना) प्रिपेरेसन गरेर यहाँ आउँछु लाबिम मल। कहिलेकाहीँ मामुले बनाउनुहुन्छ। मेरो मिल बनाउन त्यति गा’ह्रो छैन। तरकारीहरु उसिन्यो, त्यस्तै हो। साढे ६ मा अफिस आयो। त्यसपछि दिनभरि यतै काम गरिन्छ। राति १० बजेसम्म व्यस्त हुन्छु।
अमित : खासमा ऊ पहिले रेडियोलोजिस्ट हो। पहिला उसले मलाई जिममा देखेकी हो। अलिकति ऊ अन्डरवेट थिई। मेरो जिममा आउँदा मैले उसलाई अलि बढी केयर गर्थें। त्यसपछि ल’भ प-यो। (हाँस्दै..) अनि त उसको वेट बढ्यो।
अमित : ट्या’नले टाँस्यो भने त्यस्तो हुन्छ के ! त्यसले बि’गार्छ, मैले बिगारेको होइन।
भन्न अ’प्ठ्यारो लाग्यो हो ?
सनम : हैन त्यो टाइम सम्झिउँ पनि कसरी भनेर ! खासमा उसले गेम हेर्न बोलाएको थियो अनि गएँ। उनीहरुको बडी हेरेर एकदमै राम्रो लाग्यो। बडी सो गर्दा जति पी’डा भए पनि स्माइल दिइरहेका हुन्छन्। ऊ त मज्जाले स्माइल दिइरहेको छ स्टेजमा। अनि बाहिर आएपछि त गा’ह्रो भयो भन्न थाल्यो। ठ्या’क्क हस्पिटलको अगाडि नै जिम थियो। जिमहरुको दाइहरु आइरहनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला नै यो मान्छे राम्रो लाग्न थाल्यो। (अमितको गालामा प्या’ट्ट हा’न्दै) म पनि जिम जान थालेँ, त्यसपछि त लभ प-यो।
सनम : सुरुमा कस्तो खालको मान्छे रै’छ जस्तो लाग्थ्यो। जिमखाना जाँदा नोटिस त गरिराहुन्थेँ। जिमखानामा पार्टेसन हुन्छ। ऊ भएको रुममा म जाँदिन थेँ। अहिले उसलाई कतै जान दिन्नँ (दुवै जना हा’इफाइभ गर्दै हाँस्दै।)
अमित : पहिले मेरो परिवारको आ’र्थिक सं’कटमा नै थियो। के गरौँ के गरौँ भइरहेको थियो। टोलका केटाहरु भन्दा म सिन्के थिएँ। मलाई दामी ज्यान बनाउन मन लाग्यो। अनि मामुले जा भन्नुभयो। दाइले त जिम गयो भने गु’ण्डा हुन्छस् भन्नुभएको थियो। त्यही भएर बुबाले पनि भयो नजा भन्नुभयो। घरमा दाइ र बुबालाई थाहा नदिई जान थालेँ। दुई वर्षपछि साउदीमा ट्रेनरको भ्याकेन्सी खुलेको थाहा पाएँ र गएँ। करिब साढे ६ वर्ष ट्रेनर भएँ। बीचमा बिरामी भएँ र त्यसले वेट धेरै बढ्यो। फेरि जिम ज्वाइन गरेँ। त्यहाँ सिकाउँदै थिएँ। तीन महिनामै २७ केजी घटेँ।
सनम : थाहा त थियो तर प्रतियोगितामा भाग लिने कुरा चाहिँ थाहा थिएन। एक दिन बिहानै कम्पिटिसनमा भाग लिन हिँड्न लागेकी थिएँ। मामुले कहाँ जान ला’ भनेर भन्नुभो ? जुम्बा कम्पिटिसन भनेर ठ’गेँ। त्यसपछि त ठ’ग्ने मेलो पाइहालेँ। एक दिन बाबा चिया खान ग’को बेला कसैले पत्रिका देखाइदिएछ। फोटोमा मैले पुरस्कार जितेकी थिएँ। अनि त घरमा म’हाभारत भइहाल्यो।
सनम : घरमा कोही नबोल्ने भए। मामाहरु पनि रि’साएर बोलेनन्।
अहिले त घरमा गा’ह्रो छैन ?
तपाईंले यता फो’र्स त गर्नुभएन नि ?
सनम : यस्तो भयो नि, हाम्रो लभ प¥यो। ऊ ए’ग्रेसिभ हुन्छ भन्ने घरकालाई थाहा थियो। मेडिकल लाइनमा हुँदा उसको बारेमा केही थाहा थिएन। जिम ज्वाइन भएपछि सबै थाहा हुन थाल्यो। उसलाई पनि जिम ज्वाइन गर्छु भन्दा उसले पनि हुन्छ भन्यो। सँगै पनि हुन पाइन्छ भन्ने लोभ लाग्यो होला, उसलाई त ! (हाँस्दै)
भक्तपुरे नेवारको त बि’किनी लगाउने चलन हुँदैन। सुरुमा कसरी प’चाउनु भयो ?
सनम : घरमा त मैले अहिलेसम्म बि’किनी लगाएको फोटो देखाएकी छैन। राम्रो लाग्छ तर लगाउनै नपाउने। बि’किनी लगाउनुपर्छ भन्दा म त गेम नै नगर्ने अवस्थामा पुगेकी थिएँ। तर उसले मोटिभेट ग-यो। (अमित तिर हेर्दै) उसले मलाई सुरुमा उठ्ने बेला भो, खाने बेला भयो भनेर कल गर फोटो पठाऊ भनेर सम्झाउँथ्यो। म धेरै अण्डा खान्थेँ कि आन्टीहरुले त कुखुराले त हिजोआज अण्डै पार्न छोड्यो भनेर व्यंग्य गर्नुहुन्थ्यो। (हाँस्दै) त्यतिबेला लाग्थ्यो, मेरो पनि पालो आउँछ। अहिले सबैले कसरी घट्ने भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। मलाई मज्जा लाग्छ।
अमित : मिहिनेत त सबैमा गर्न पर्छ तर आफूलाई जे कुरामा मज्जा लाग्छ, त्यसमा अनुशासित हुँदा अझ रमाइलो। बाहिर खाना खाँदिनँ…आफैँ बोक्नुपर्छ…
(बीचैमा का’ट्दै )
सनम : डे’टिङ जाँदा पनि के गर्छ थाहा छ यो मान्छे ? (अमिततिर हेर्दै) टिफिन बोक्छ। मान्छे घुम्न गइराछ, मस्ती गर्नुछैन, साथीहरुको ग्रुपमा पनि टिफिनकै खाना खान्छ।
अमित : (हाँस्दै) हैन…हैन डाइट बि’ग्रन्छ भनेर हो।
सनम : पहिला चैँ डाइट बि’ग्रन्न थियो त ? (हाँस्दै) यो ठाउँ, ऊ ठाउँ जाऊँ भन्थ्यौ त !
वर्क आउट गर्न क’त्तिको गा’ह्रो ?
अमित : कुनै पनि कुरा बडीले एडप्ट गर्ने हो। आफूले जता लग्यो, त्यतै लाने हो। सुरुमा त गा’ह्रो हुन्छ नै। पछि त बडीले एसेप्ट गरिहाल्छ। जिम गर्नेहरु भन्छन् नि, ज्या’न दु’ख्छ भनेर। खासमा त्यस्तो हुन्न। पे’न भएन भने झन् मजा नै आउँदैन।
सनम : सुरुमा त गा’ह्रो हुन्थ्यो। पहिला दु’ख्थ्यो पनि अहिले दु’खेन भने किन दु’खेन के भएछ भन्ने लाग्छ।
फोटो त ख’तरा राख्नुहुन्छ है फेसबुक इस्टातिर ! घरमा के भन्नुहुन्छ ?
कामको बारे त अ’प्ठेरो सजिलो छँदैछ। जेन्डरको कारण पनि थप गा’ह्रो हुने है ?
सनम : अँ धेरै गा’ह्रो। अस्ति म फस्र्ट भएपछि भने सजिलो हुँदै गएको छ। पहिला केही खाँदैन, कस्ती केटी हो भन्थे। अहिले के खान्छौ र ज्यान बनाउँछौ भनेर सोध्छन्।
सनम : दुवैलाई हो। महिलाहरुको पेट ड्या’म्म हुन्छ, कसरी घटाउने भन्नुहुन्छ। उहाँहरुले मेरो पे’ट देखाउँदै यस्तै बनाउने भन्नु हुन्छ। छोराछोरीलाई पकाएको चा’ख्दाचाख्दै मोटाइछु भन्नुहुन्छ। रमाइलै छ काम !
सनमजी मि’न्स भएको बेला गा’ह्रो हुन्छ हो ?
सनम : पेट दुखि’रा हुन्छ नि ! नर्मल्ली अघिपछि ५ केजी उचाल्थेँ भने मिन्स भएको बेला साढे सात केजी उचाल्छु। मलाई के लाग्छ भने पेटकोे पे’न अरु ठाउँमा सर्छ।
अमित : धेरै गा’ह्रो हुने ए’क्सरसाइज गरे केही हुन्न के !
पा’ठेघरै झ‘र्छ भन्छन् नि ?
अमित : ७/८ महिनाको प्रे’ग्नेन्सीले स्क्वाट गरिरहेको हुन्छ। यो त प्राकृतिक हो नि ! खेल्दैमा केही हुन्न।
केटीहरु प्र’तिस्पर्धामा जाने भनेर कतिको आउँछन् ?
सनम : करियर बनाउँछु भनेर आउँदैनन्। मलाई लाग्छ बि’किनी लगाउनुपर्छ भनेर आउँदैनन्।
अमित: घरका मान्छेहरुले जिमखाना खोले हुन्थ्यो भन्छन् तर नेपालमा जताततै छ जिमखाना। स्टान्डर्ड खोलेन भने चल्दैन। एक्स्ट्राको लागि खर्च पनि बढी लाग्छ। सरकारले ल’क्जरियस ट्याक्स बढी लिएर होला सायद। सरकारले यो कामलाग्ने कुरा हो भन्ने सोच्दै सोच्दैन। खेलाडीप्रति कुनै चासो छैन। गु’नासो गरेको हैन तर खेल्न वातावरण सिर्जना गरिदिए हुने।
सनम : चा’न्स पायो गरिन्छ नि, हैन !
अमित : सुरुमा १० वर्षअघि त टोले गु’ण्डा बालुवाखानीमा काम गर्ने मात्र आउँथे। अहिले डाक्टरले पनि जिम जानु भन्ने सल्लाह दिन थालेका छन्। फिटनेसको महत्व बढ्दै गएको छ।
सनम : न पौडी खेल्न आउँछ, न केही थाहा छ। च्या’प्प पक्डे’र फुत्त नदीमा फाल्दिने के ! (रि’साएजस्तो गर्दै)
अमित : बूढापाकाले त्यसरी नै फाल्ने भन्थे के रे ! पौडन सिकाउने त्यसरी नै होला भन्ने लाग्यो अनि फ्या’लिदिएँ।
सनम : स’माको छ… फालेको छ। आफूले त फाल्यो नै अरुलाई पनि बोलाएर फाल्न लगाएर है’रान ! चिसोले एक हप्तासम्म त मेरो आवाज नै आएन।
अमित : राम्रो बानी केयर गर्छे, नराम्रो चैँ रि’साउँछे।
सनम : म रि’साउँछु ? साँच्चै ? (गा’लामा प्या’ट्ट हा’न्दै)
सनम : उसले सबैलाई मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ। त्यो राम्रो लाग्छ। नराम्रो चैँ अकस्मात् रि’साइरा’ हुन्छ।
झ’गडा परेर नबोलेको पनि छ कि ?
अमित चन्द्र आर्य र सनम मुलगुठी बडिबिल्डर हुन्। अमित सन् २०१७ मा भएको मिस्टर काठमाडौँ र मिस्टर भ्याली प्रतियोगिताको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। त्यस्तै मिस्टर भक्तपुर २०१८ को गोल्डमेडालिस्ट हुन् भने सनम २०१८ मा भएको मिस्टर भक्तपुरको महिला तर्फको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। प्रेमी–प्रेमिका उनीहरु ललितपुरको फिटसपमा बडिबिल्डरको रुपमा काम गर्छन्।
प्रकाशित मिति १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १०:२५